श्रीमानको विदेशमा काम गर्दा भुँडी फु ट्यो ,स्वास्नी भने छोराछोरीलाई कोठामा धु नेर ना ठोसंग मो ज गर्दै जिन्दगी बि त्यो (भिडियो हेर्नुस्) - Nilokhabar
Home समाचार श्रीमानको विदेशमा काम गर्दा भुँडी फु ट्यो ,स्वास्नी भने छोराछोरीलाई कोठामा धु...
श्रीमानको विदेशमा काम गर्दा भुँडी फु ट्यो ,स्वास्नी भने छोराछोरीलाई कोठामा धु नेर ना ठोसंग मो ज गर्दै जिन्दगी बि त्यो (भिडियो हेर्नुस्)
वैदेशिक रोजगारि नेपालिहरुको लागि रहरभन्दा बढि बा’ध्यता हो । देशमा रोजगारिको अवसर नहुदा नेपालका युबायुबतिहरु बर्सेनि हजारौको संख्यामा बिदेशिइरहेका छ्न र उनिहरुको गन्तव्य भने खा’डी मुलुकहरु बन्दै गएका छ्न । घरपरिवारको अबस्थामा केही सुधार आउने हिसाबले दुइचार पैसा कमाउन भनी गएका नेपालीहरुको स”मस्याको बिषय किन बन्दैछ पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी ? श्रीमान बिदेश जादा श्रीमती अर्कै भा”ग्ने त कहिले श्रीमती घरमै छ्दा श्रीमान अर्कै महिलासग लागेर गा”यब हुने कुराहरु त सामान्य विषय नै बन्दै गएका छ्न पछिल्लो समय त । आजको घटनापनि यहि विषयमा मेल खाने प्रकृतिको रहेको छ ।
कसैको जिबनमा यहि बैदेशिक रोजगारी खुसी बहार बनेर आउँछ त कसैको जिबनमा यहि वैदेशिक रोजगार दु”खै”दु”खको सगालो बनेर आइरहेको छ पछिल्लो समय । तनहु जिल्ला भिमाध नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा घर भएका मिनबहादुर बिश्वकर्मा नाम गरेका एक पुरुष आज मिडियासामु आफ्ना जिन्दगीका दु”ख अनि ब्य”थाहरु सुनाउदै आएका छन । जिन्दगी राम्ररी नै चलिरहेको थियो उनको दुई छोरा एक छोरी अनि आफुलाइ माया गर्ने एक श्रीमती ।
तर उनलाइ पनि बिदेश जाने रहर जाग्यो, दुइचार पैसा कमाएर परिवारको अबस्थामा सुधार ल्याउने रहर भयो र यसैक्रममा उनी बिदेशतिर हा”निए तब सुरु भयो उनको जिबनको सबैभन्दा न”राम्रो समय । एउटा गाडी दु”र्घटना भएर झन्डै बिदेशमा नै ज्या”न गुमाएनन उनले, संजोगले ज्या”न बाचेको बताउछ्न उनी । दु”र्घटनापछि हेलिकप्टरले अस्पताल पुर्याएकै कारण उनी आज हामीमाझ रहेको बताउछ्न उनी । पेटमा नराम्ररी चो”ट लागेको छ उनको, निरन्तर १ घण्टा बोल्न पनि सक्दैनन उनि, काम गर्नको त कुरै छोड्दिम ।
लामो समयसम्म उनी अस्पतालमै उपचाररत हुदा यता गाउघरमा भने मिनबहादुर म”रिसकेको भन्ने खबर पनि आयो । आफ्नो शरीरले त ठ”ग्यो ठ”ग्यो भाग्यले पनि उनलाइ ठ”ग्दै गयो, त्यसतै अबस्थामा पनि उनले काम गर्न भने छो”डेनन तर उनको दु”र्भाग्य उनी गैरकानुनि रुपमा काम गर्दै थिए र कम्पनीबाट पनि ह”टाइए । यसै विषयमा जे”ल पनि बस्नुपर्यो उनी । त्यसैबेला उनलाई खबर पुग्यो कि गाउमा उनकी श्रीमतीको नि”को”चा”ल छैन, चाहेर पनि आफुसग पासपोर्ट लगायत अन्य कागजात नभएकोले उनि नेपाल फर्कन सकेनन ।
त्यसै गै”रकानुनी कामकै कारण उनी बिदेशमा प्रहरीको हि”रासतमा पनि परे । श्रीमान उता जे”लमा हुदा यता श्रीमती भने आफ्ना तीन छोराछोरीलाइ कोठामा चु”कुल लगाएर थुनी प”र”पुरुषसग र”स”लि”लामै ब्य”स्त थिइन । क”ठै ब”रा ती छोरा आफुहरुलाइ छ्यामाले ढोका थु”निदिएको र ममि अर्कै पुरुषसग घरमै भेट्ने गरेको बताउछ्न । एकपटक त गाउलेहरुले उक्त पुरुषलाई ल”खेटेको पनि उनि बताउछ्न ।
लक्ष्मी नाम गरेकी उनकी श्रीमतीको व्यवहार भने कुनै रा”क्षसको भन्दा कमि थिएन । तीन छोराछोरीको बि”चल्ली त उनले बनाइन नै साथमा उनले घरमा भएको सबै सम्पती पनि साथमै लिएर भा”गेकी रहिछिन । १६ १७ लाख पैसा,बारिमा फलेको अन्न, बैंकको पैसा देखि लिएर पशु चौपाया केही नरहेको बताउछ्न मिनबहादुर । खाना पकाउने भाडा समेत नरहेको बताउछ्न उनी । एक माना चामल किन्ने पैसा छैन, छोराछोरीको भबिष्य आफ्नै हातमा छ के गरौ कसो गरौ भन्दै खुब चि”न्ता गर्छ्न उनी ।
Previous articleसाउदिमा एकै दिनमा १०८ जनाको मृत्यु पूरा पढी Rip लेखी Share गर्नुस
Next articleचन्द्रागिरीमा सुजन लामाको श’व फेला
तामाकोशीको अध्यक्षमा को-को दाबेदार: एमाले-कांग्रेसका पुर्व जिल्ला नेतृत्व मैदानमा
नेपालमा पहिलोपटक संक्रमणको नयाँ रेकर्ड, जे नहुनु थियो आज भैदियो
वीरगञ्जबाट सुर्खेत जाँदै गरेको बस दाङ देउखुरीमा दु`र्घ`टना, ९ जना घा`इते
७७ वर्षीया वृद्धा बलात्कारको घटनामा नेता, शिक्षकसहित पाँच पक्राउ
धामीको ‘आश्रम’ मा किशोरी मृत्यु प्रकरण : त्रिशूलले घोचेर हत्या !
काठमाडौंमा लि’भि’ङ टु’गेदर बस्दै आएका प्रेमी प्रेमिकाले मासु र”क्सी खाए अनि यौ”नस’म्प’र्क बारे कुरा नमिल्दा ह”त्या र आ’त्माह”त्याको आशंका…
कैलालीमा फेरि अर्को डरलाग्दो घटना घट्यो।
हिमपातमा परेर २१ जनाको मृत्यु, एक प्रहरीले गुमाए श्रीमती र ६ छोराछोरी
आमा बन्न एक महिना मात्र बाकि थियो , दाइजो नदिएको भन्दै श्रीमानले नै मा”रेको आ’रोप ( भिडियो सहित हेर्नुहोस )